DAAWO SAWIRADA:- Sida Al-shabaab looga saaray degmada Buulo Mareer
Waa muuqaalo muujinaaya sida ciidamada DF iyo kuwa AMISOM ay maalintii shalay ahayd Al-shabaab uga saareen degmada Buulo Mareer ee Shabeelaha Hoose iyo deegaano kale oo degmadaasi hoostagta.
Qoraal lagusoo daabacay barta Amisom kuleedahay facebook ayaa lagu sheegay in Buulo mareer ay tahay magaalo ganacsi oo muhiim ah oo alshabaab hubka iyo qaraxyada ku kala gudbin jirtay. waxayna ku dhowdahay magaalada Baraawe oo ah magaalo xeebeedkii ugu dambeysay oo ay Alshabaab haatan gacanta ku haystaan.
Taariikh kooban oo ku saabsan Buulo Mareer.
Magaalada Buulo Mareer waxay 126 KM u Jirtaa Magaalada Muqdisho waa deegan aad ugu kobcay waayadaan danbe xagga Ganacsi waxaana hoos yimaado Sida cambareey iyo jeerow. Buulomareer Waxay halbowlo utahay isku Xirka wadada dheer ee Kismaayo iyo Muqdisho. Buulo Mareer waxaa loo Qeybiyaa Sedex Xaafad. waxayna kala yihiin Xaafad Jadiid, Oros iyo Sheikh Xaashi. waxaa deegaanka wada daga qaba ilo fara badan. waxay leedahay Beero fara badan iyo Aseendooyin waana magaalo Bilic Qurxoon Dadkeedana ma ahan Dad Dagaalka Jecel waxayna u badanyihiin Ganacsato iyo Beeraleey.
Halkaan ka daawo ciidamada Amisom ee la wareegay magaalada.
XOG:- Somaliland oo lumisay taageerada wadamo badan oo caalamka ah (AKHRI SABABTA)
Maamulka Somaliland ayaa taageero ka haysatay qaar ka mid ah wadamada caalamka, waxaana loo haystay maamulka ugu nabdoon ee Soomaaliya 20-kii sano ee lasoo dhaafay.
Hase ahaatee taasi ayaa beenowday, waxaana hadda ay lumisay wadamo badan iyo sidoo kale ururo caalami ah oo kalsoonidii nabadda kala noqday.
Ka dib markii duulaan cad ay ku qaadeen deegaanka Saaxdheer waxay taasi yusisay caalamka in maamulkaan uu yahay mid la meel uu ku dagaalamo, una ooman daadinta dhiiga dadka shacabka ah.
Waxaa durba soo yeeray baaqyo deg deg ah misane ku saabsan in ciidankeeda kala baxdo Saaxdheer si aan mugdi ku jirin, Somaliland saacado ayeey taasi ka madax adeegtay.
Dowaladaha Mareekanka, Ingiriiska ayaa liiska gobalada qasan ku daray dhamaan gobalada Somaliland maamulaan, waxaana loo aqoonsaday in qeyb ay ka yihiin maamulada dalka dhibka ka wada.
Saaxdheer ayaa kaliftay in Somaliland ay sumcad badan ku lumiso, waxaana taaso oo dhan eedeeda dusha laga saaray maamulka Siilaanyo oo doonaaya in muddo Sanad ahi xilka ku darsado.
Xisbiyada Mucaaridka ah waxay sheegeen in Siilaanyo dagaaladaan uu kaga golleeyahay in aanu doorasho dhici, islamarkaana uu ku darsado muddo sanad dheeraad ah.
XOG:- Maxamuud Sayid Aadan oo ku wajahan magaalada Kismaayo
Siyaasiga caanka ah ee reer Gedo Maxamuud Sayid Aadan ayaa la wadaa qorshihii uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose.
Warar ay si hoose u heshay Shabakada jornalizem ayaa waxay sheegayaan in siyaasiin caan ah kana soo jeeda Gedo kuwaa oo jooga magaalada Kismaayo ay markaan usoo jeesteen keenista Maxamuud Sayid Aadan.
Waxaa laga yaabaa Maxamuud in uu soo raaco wafdi dowladda Federaalka ah oo dhawaan Baydhaba ku wajahan kuwaa oo imaan doona magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaa Muqdisho imaan doona siyaasiin iyo Odayaal reer Gedo ah kuwaa oo siyaasad ahaan diidanaa maamulka Axmed Madoobe hogaamiyo.
Hadaba markii ay Muqdisho yimaadaan ayaa waxay wada aadi doonaan dhanka magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose, si ay qeyb uga qaataan maamulka Jubba iyo dhismihiisa.
DEG DEG:- Degmada Baardheere oo loo ruqaansaday iyo dhaq dhaqaaqyo bilawday
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaaya kuwa AMISOM ayaa lasoo sheegayaa in saaka ay u dhaqaaqeen dhanka degmada Baardheere iyaga oo doonaaya in Al-shabaab halkaasi ka saaraan.
Wararka ayaa waxay intaasi ku daraayaan in ciidamadaan ay la wareegeen ilaa sedax deegaan oo Al-shabaabka maamulaayeen, waxaana socda dhaq dhaqaaqyo xoogan oo Labada dhinc ay kala wadaan.
Korneel Maxamed C/laahi oo ah Afhayeenka maamulka gobalka Gedo ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku dhawyihiin degmada Baardheer ayna dhawaan gacanta ku dhigi doonaan waa sida hadalka u dhigaye.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday wejigii ugu dambeeyay dagaal lala galo Al-shabaab meel wlaba oo dalka ay ka joogaan.
Wararkii ugu dambeeyay degmada Baraawe oo dagaalo culus ay ka dhaceen
Xaalada Degmada Buulo Mareer ee Gobalka Shabeelaha Hoose, ayaa saaka oo Axad ah waxa ay tahay mid degan, kadib dagaal faraha looga gubtay oo shalay ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom ay ku la wareegeen gacan ku haynta Degmadaasi.
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Amisom, ayaa daafacyo ka sameystay duleedyada Magaalada Buulo mareer, si ay isaga ilaaliyaan Shabaabka suuragalka ay tahay inay soo weeraraan.
Magaalada waxaa ku sugan oo jooga inyar oo dad ah, halka dadkii kale ee Magaalada joogay ay shalay ka barakaceen, markii Magaalada gulufka colaadeed ay kula wareegayeen ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom.
Xaalada degan ee Degmada Buulo mareer ayaan aheyn, mid cago badan ku taagan, maadaama ay suuragal tahay in Shabaab ay saacad waliba soo weeraraan Degmada Buulo Mareer.
Afhayeenka dhanka Howlgalada Ururka Al Shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay Warbaahinta, ayaa wuxuu sheegay in ciidamada ku sugan Degmada Buulo mareer ay go’doomiyeen oo aysan jirin meel ay u baxsan karaan.
Buulo Mareer ayaa 80-KM ujirta Degmada muhiimka ah ee Baraawe, waxaa halkaasi ku xoogan Al Shabaab oo inta badan saraakiishooda ay ku sugan yihiin sida wararka ay sheegayaan.
Buulo Mareer ayaa shalay waxaa u bilaabatay jawi ka duwan kii Shabaab ay muddo 5-sano ah ku maamulayeen.
Cali Khaliif Galeyr oo ka warbixiyay dagaalka Somaliland ay ku soo qaaday maamulkiisa
Madaxweynaha cusub ee maamulka Khaatumo State, Pro Cali Khaliif Galeyr ayaa faah-faahin ka bixiyay sababta ciidamada Somaliland ay ugu soo duuleyn deeganka Saaxdheer oo lagu waday shaley in ay ka dhacdo caleema saarkiisa.
Cali Khaliif Galeyr oo ka hadlayay deeganka Togga Aragsan oo lagu caleema saaray ayaa sheegay in dagaalka lagu hayo maamulkiisa uu yahay maxaa ka rabtaan midnimada Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in gardarro qaawan ay tahay dagaalka Somaliland ay ku soo qaaday deeganka Saaxdheer oo shaley la rabay in ay ka dhacdo xafladda caleema saarkiisa.
Cali Khaliif Galeyr ayaa tilmaamay in dagaalka lagu hayo uu yahay mid ku kooban maamulka Somaliland ee shacabka Somaliland kuma lug lahan ayuu yiri.
Madaxweynaha maamulka Khaatumo State ayaa ku celceliyay in maamulkiisa uu diyaar la yahay wadahadal iyo daris wanaag uu kula noolaado maamulada dariska ah sidda Somaliland iyo Puntland.
Cali Khaliif Galeyr ayaa canaan kala dul dhacay dowladda fedaraalka oo uu sheegay in aysan taageero u fidin maamulkiisa isla markaana aaney waxbo ka qaban gardarrada lagu hayo Khaatumo State mar kasta sidda uu yiri.
Si kastaba, dagaalkii shaley ka dhacay deeganka Saaxdheer ayaa inta la ogyahay waxaa ku dhintay 10 askari oo ah labada dhinac waxaa kaloo jira dad ku barakacay kuwaasoo ka cabsi qabay in dagaalka uu daba dheeraado.
XOG CUSUB:- Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale oo kala booday (QODOBO LAGU MURMAAY)
Ilo muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo, ayaa Alldhacdo.com u sheegay in Wasiirada ay Ergadaan u muujiyeen in xoog lagu heysto Magaalada Kismaayo, ha yeeshee ay arrintoodu ula noqon doonaan Madaxda Dowladda, isla-markaana ay go’aan mideysan ka qaadan doonaan wax ka bedelka lagu sameeyay, waxyaabihii ay ku wada heshiiyeen Arbacadii.
Sarkaal ku dhow Barre Aadan Shire, ayaa Alldhacdo.com u sheegay in Barre Hiiraale uu u arko is bedelka lagu sameeyay heshiiskii la gaaray, sida Maamulka Jubba iyo Dowladda Kenya aynaan u doonayn, in dib u heshiisiin sax ah loo sameeyo beelaha Jubbooyinka iyo Gedo.
Muqdisho oo warqado walaac abuuray lagu daadiyey (MAXAA KU QORNAA?)
Warqado loogu digayo Haweenka ku nool magaalada Muqdisho ee qaata dharka qafiifka ah iyo diracyada cowradooda laga arkayo ayaa lagu daadiyay degmooyinka Hodan iyo Wadajir, waxayna warqadahaasi ay keeneen cabsi soo wajahday dumarka qaarkood.
Warqadahan ayaa waxaa ku qornaa in dumarka ku nool Muqdisho ee qaata dharka qafiifka ah ee dhex socda magaalada in ay ku badalaan Jalbaabka iyo xijaabka, cowradoodana qariyaan, qofkii lagu arkana isagoo wata dhar qafiif ah in tallaabo laga qaadi doono.
Hay’adda Nabad Suggida ee Gobolka Banaadir, ayaa waxay wadaa dadaalo ay ku dooneyso inay ku soo qabato gaari nooca raaxada ah, oo sida la sheegay habeenimadii Arbacada waraaqahaasi ku daadiyay qeybo ka mid ah degmooyinka hodan iyo Wadajir.
Sarkaal ka tirsan Hay’adda Nabad Suggida oo diiday in magaciisa Warbaahinta loo adeegsado, ayaa sheegaaya inay xogta ku hayaan in gaari nooca raaxada ah, loo adeegsaday waraaqihii lagu daadiyay Degmooyinka Wadajir iyo Hodan, isla markaana ay wadaan baaritaano iyo dadaalo lagu soo qabanayo gaariga loo adeegsaday.
Xeebta Liido ayaa maalmaha Jimcaha waxaa isugu taga dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar, kuwaasi oo qaarkood cowradooda asturan.
Lama oga kooxaha ka danbeeyay digniinahan loo jeediyay dumarka Muqdisho ku nool, inkastoo Al-Shabaabka, horey Dowladda Somalia ugu eedeeyay inay fisqi ka wado Magaalada Muqdisho.
XOG: Maxaad kala socotaa XILKA sare ee Bare Hiiraale oo loo ballan qaaday?
Warar aanu helnay waxay sheegayaan in wasiirkii hore ee gaashandhigga Soomaaliya loo magacaabi doono xil culus, haddi wada-hadallada socda si buuxda loogu guuleysto.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in Barre Hiiraale loo magacaabi doono madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee maamulka Jubba marka uu dhammaado shirka dib u heshiisiinta ee 21-ka bisha soo socota ka dhacaya magaalada Kismaayo.
Xilka loo magacaabayo Barre Hiiraale waxaa hadda ku fadhiya Jeneraal Cabdullaahi Ismaacil Fartaag, balse waxaa la lee yahay waxaa xilkaas la isku afgartay in uu la wareego Barre Hiiraale, maadama raggii kale ee la sheegtay madaxweynaha Jubba loo dhiibay xilal sar sare.
Haddii heshiis laga gaaro khilaafka ka taagan Jubbooyinka, waa guul u soo hoyotay dowladda Soomaaliya maadama muddo ka badan sannad ay ku howlaneed soo afjarida khilaafka ka dhexeeya maamulka Jubba iyo Barre Hiiraale.
Sidoo kale, dowladda waxay maamul rasmi u aqoonsan doontaa maamulka uu madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe.
Barre Hiiraale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu oggolaaday in uu si shuruud la’aan ah uga qeybgalo shirka dib u heshiisiinta ee Kismaayo ka dhacay bisha na soo aadan.
Arrintan in ay hirgasho waxaa door ku leh dowladda Kenya, Itoobiya iyo urur gobaleedka IGAD, in kastoo mid kasta uu lee yahay dan gaar ah.
CALI KHALIIF GALLEYR DHAGAXUU KU ISTAAGO-BA WAA LA DHACAA (FAALLO)
Cali Khaliif Galleyr waa nin masiibadu minin ka dhigatay dhagaxi uu ku istaago waa la dhacaa, ciddi la joogtana waa ka daba dhacdaa.. waxaa jiray nin isaga lagu mathali karo oo ku noolaa waddamada khaliijka midkood..ninkaas muddo ayuu shaqo la’aan ahaa…markii dambe wuxuu helay shaqo mushahar fiican laga qaato. Muddo aan sidaa u badneyn ayuu shaqadi hayay..maalintii dambe isaga iyo cid allaala cidii la shaqeysay ama saxIib la naqatay waa la wada ruqseeyay iyadoon wax sabab ahna loo sheegin.
Wuxuu isku dayay inuu visa ka helo waddamada Yurub midkood, markaasaa baasaboorki waxaa loo diray dalka Kuwait oo saldhig u ahaa safaaradaha badankooda. Marki baasaboorki gaaray Kuwait iyadibaa lagu soo duulay oo Saddaam Xuseen qabsaday. Baasaboorki halkasuu ku dhumay.
Wuxuu go’aansaday inuu Somaliya iska aado, waa markuu bilawday kacdoonki dowladda ku burburtay, Jaalle Maxamed Siyaadna dalki ka cararay…wuxuu Xamar tegay magaalada oo deggan wax rabshada ahna aysan ka jirin.
Maalinti uu tegay ayaa waxaa bilawday dagaalki loo yiqiin seddaxda beri…waxaa ku xigay kii afarta biloood oo bilawday bishi November 1991 ee Caydiid iyo Cali Mahdi kaasoo la joojiyay bishi Maarso oo Ramadaaan bilawday…markaasuu saaxibkeen u safray dalka Kenya iyadoo laga cararayo dagaalladi inay soo cusboonaadaan.
Maalinti uu gaaray Nairobi waxaa bilawday bannabbaxyo aad u waaweyn oo dad ku dhintay loogana soo horjeeday Madaxweynihi Arap Moi waxaana hogaaminaayay mucaaradka uu madax ka ahaa Ojinga Odinga.
Haddaba Cali Galleyr wuxuu nasiib xumadiisa ka billaabay xilligii kacaanka oo loo diray inuu warshad sonkorta sameysa soo iibiyo, wixi ka dhacay waa la ogaa mana rabno inaan taas ka hadalno. Waxaa xigtay dowladdi lagu soo dhisay Carta oo loo magacaabay Raisul Wasaare, waana marki Madaxweyne Cabdi-Qaasim rabshadu ku billaabatay oo nimakii dagaal oogayaasha ahaa (war-loards) ay ka soo horjeesteen waxaana lagu laaluushay lacago fara badan..waxaa lacagti diiday inuu qaato Muuse Suudi.
Waa kii barlamaanka soo galay oo markuu ku hungoobay doorashadi af-hayeenka barlamaanka dowladda ka soo horjeestay ilaa uu saaxib la noqday R/Wasaare Saacid, asagana barakadi Cali Galleyr ayaa shibaakada kala baxday oo waa tii barlamaanku kalsoonidi kala naqday.
Galleyr wuxuu iska fadhiistay Nairobi isagoo ka noqday qaswadayashi ximin firfircoon laakin inta uu dhuuman karo is-qariya..ilaa maalintii dambe uu tegay WestGate Mall waana maalinta xasuuqa ka dhici doono.. Berigaas ayaan hamiyay inaan reer Khaatumo oo asaxaab badan aan ku leeyahay u sheego ninkaan inuu yahay mukulaal madow oo ay musiibadu minin ka dhigatay halkuu cagta dhigana deb ka kacaayo.
Isku daygii reer Khaatumo oo damcay inay doortaan hogaan markey isugu tageen Taleex waa tuu Galleyr tegay oo ay ku dhammaatay in Taleex la qabsado isagiina dirqi ku baxsaday, doorashadii dhici lahaydna halkaa looga tanazulo.
Waa taa maalintu Khatumo madaxweyne u naqday ayaan-darradu ku habsatay oo hoog, dhimasho, burbur iyo barakac u horseeday ummadi..dadaa waxay dhihi doonaan waa khuraafaat iyo waxa la yiraahdo “superstition” laakin waa arrin cilmi ku fadhida oo la xaqiijiyay inay jiraan dad noocaas ah oo nasiib darro dusha ku sita meeshi ay ka taliyaana lagu kala cararo… haddaba Intey goori goor tahay Cali ka tashada talana ha u dhiibanina..ma ahan inaan nebcahay waa waanaaga aan la jecelahay inay Khatumo State of Somaliya cagaheeda ku istaagto dhismaha iyo mideynta dalka Somaliyana dowr fiican ka qaadata dadkeedana dhinac ka raacda.
Wasiirka gaashaandhigga DF oo si aan horay looga baran u hanjabay
Dalka Turkiga waxaa ku sugan wafdi dowladda Soomaaliya ka socda waxaana ka mid ah wasiirka gaashandhigga xukuumadda Soomaaliya, Jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud,
Wasiirka gaashandhigga ayaa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay saraakiisha ciidamada dalkaas oo uu ku jirro dhiggiisa dalkaas Cizmaad Yalmiz, waxaana uu ka warbixiyay wax yaabaha u qabsoomay tan iyo markii uu yimid Turkiga
Wasiirka ayaa ugu horeyn sheegay in isaga iyo dhiggiisa dalka Turkiga ay kala saxiixdeen heshiis dowladda Turkiga ay uga qeyb qaadaneyso dhismaha iyo tayeenta ciidanka dhulka, badda iyo cirka ee Soomaaliya.
Wuxuu sheegay oo kale in Turkiga oo ka mid ah waddamada Yurub in ay ballan qaadeyn siddii ay door uga qaadan lahaayeen ciidan xooggan oo Soomaaliya loo dhiso.
Waxaa la weydiiyay in ay jiraan ciidamo xilligan Soomaaliya loogu tabbabaraayo dalka Turkiga, wuxuu sheegay in aysan jirin wax ciidan ah oo imminka Soomaaliya loogu tabbabaarayo Turkiga balse ay horrey u jireen arday wax bartay oo la baraay ciidamada cirka iyo badda.
Waxaa la weydiiyay oo kale in ay jirin qalab culus oo ciidan oo Turkiga uu siiyay Soomaaliya, wuxuu xusay in aysan inaba jirin wax qalab ah oo Turkiga ay ka heleen isagoona intaas ku daray in Soomaaliya uu saaran yahay cunaqabateyn dhinaca hubka ah marka laga reebo in loo oggolaaday in ay soo iibsadaan hub yer-yer.
Ugu dambeyn waxaa la weydiiyay wasiirka gaashandhigga oo wareysi sii yay Idaacadda VOA-da in uu ka warbixiyo gulufka dagaalka ee dowladda ay ku dhawaaqday kaasoo la rabo in dalka looga xorreeyo Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay in wax guluf dagaal la dhaho oo cusub aaney jirin balse howlaha hadda socday ay yihiin kuwa horrey u socday isla markaana dib loo saxayo qaladaadkii dhacay wajigii hore ee dagaalka Shabaab.
Wasiirka waxaa kaloo uu sheegay inta Shabaab uu jirro in dagaalka dowladda ay kula jirto uu socon doono.
Qorshaha guud ee laga damacsan yahay Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale
Dowladda Federaalka ayaa markii ugu horeysay waxay ku guuleesatay in hogaamiyaha maamulka Jubba Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale ay ogolaadaan in ay is hor fariistaan nabaddana laga shaqeeyo.
Sidoo kale wasiiro ayaa shalay waxay gaareen deegaanka Goobweyn ee gobalka Jubada Hoose, waxaana halkaasi ku suura gashay in weji ka weji ay ula kulmaan Barre Hiiraale iyadoo aanay wax dhibaato ah dhicin.
Dhawaan waxaa magaalada Kismaayo loo soo galbin doonaa Barre Aada Shire Hiiraale iyo sidoo kale dhamaan ciidamada la socda oo badi magaalada degi doona halka kuwo kalena meel xero ah loo diyaariyay.
ULJEEDKA LA LEEYAHAY
Dowladda hadda maamulka Axmed Madoobe hogaamiyo uma aqoonsana dowlad gobaleed, waa maamul KMG ah, kaa oo hoos tagaayo DF.
Waxay doonaysaa maadaama Laba sano ay siisay maamulkaan, islamarkaana Labada sano hadda ay wax badan ka baxeen, in marka hore maamulkaan uu noqdo kii looga gudbi lahaa khilaafka iyo dhibaatada jirta.
Waxaa la doonayaa in shacabka Jubooyinka iyo Gedo ay noqdaa kuwo is raaca islamarkaana ilooba wax walba oo horay usoo dhex maray sida dagaalada IWM.
Waxaa la diyaarin doonaa doorasho balaaran oo ah maamul gobaleed kaa oo shaqeyn doona muddo Afar Sano ah, waxaana doorashadaan sameyn doona xildhibaano Jubaland ah laakiinse qaab qabiil lagu soo xulaayo.
Afartaas Sano ayaa maamulkaasi waxa uu ku diyaarin doonaa in ay dhacdo doorasho xur ah oo shacabka gobaladaasi degan ay maamulka cidda ay doonaan u dooran karaan.
TOP NEWS:- Yuusuf Indha-Cadde oo sheegay in hal arrin darteed aan hubka laga qaadeyn
XOG: Maxaad kala soctaa afarta qodob ee HIIRAALE uu ka tirsanayo Madoobe
Sargaal ka qeybqaatay kullankii u dhexeeyay Wasiirada ka socday DF iyo Barre Hiiraale ee ka dhacay Duleedka Kismaayo ayaa waxa uu inoo xaqiijiyay in Col. Barre Hiiraale uu ka cabanaayo Arrimo farabadan oo uu ku kacay Axmed Madoobe.
Sargaalka ayaa waxa uu sheegay in Col. Barre Hiiraale Wafdiga Wasiirada ka socday DF u sheegay qodobo dhowr ah oo ku qasbay inuu la dagaalamo Maamulka KMG Jubba.
Haddaba Qodobada uu ka cabanaayo Barre Hiiraale ayaa waxaa kamid ahaa:-
1-In Axmed Madoobe uu iska dhigay ruux Kismaayo ay u gaar tahay.
2-In Axmed Madoobe uu nolosha ku aasay Maleeshiyaad daacad u ahaa Barre.
3-In Axmed Madoobe uu Maleeshiyadiisa ku amray inay toogtaan Askari waliba oo taabacsan Barre Hiiraale.
4-In Axmed Badoobe uu isku dayay inuu dilo dhowr jeer.
Dhanka kale, Wasiirada ayaa waxa ay Col. Barre Hiiraale ku qanciyeen inuu kasoo tallaabo Khilaafyadii kala dhexeeyay Axmed Madoobe.
Wasiirada ayaa waxa ay Barre Hiiraale u ballan qaaden inay jawaab ka bixin doonaan Ficilada uu kula kacay Axmed Madoobe.
Waxaa lagu wadaa in Laba maalin gudahooda lagu kulansiiyo Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale, iyadoona ay Juhdiga ugu badan ku bixinayaan Wasiirada iyo Wafdi ka socda IGAD.
Ciidamo kasoo goostay Puntland oo ku biiray Gal-Mudug, xilli ay BEELO badan isaga baxayaan maamulkaas (Warbixin)
Ciidamo ka tirsanaa Maamulka Puntland oo soo goostay, ayaa ku biiray Maamulka Galmudug, xilli ay beelo badan isaga baxayaan maamulkaas.
Ku dhawaad 80 Askari oo wata Gaadiidka Dagaalka ayaa Maanta sheegay in ay kasoo goosteen Maamulka Puntland, waxaana Koonfurta Magaalada Gaalkacyo kusoo dhoweeyay Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Galmudug, ayaa sheegay in Ciidamadaan ay ka mid ahaayeen kuwa Puntland islamarkaana hada ay ku soo biireen Maamulka Galmudug, ayna soo dhoweynayaan.
Beesha Leelkase oo ka mid aheyd Beelaha Wax ka dhisay Puntland ayaa Maanta shaacisay in ay ka baxeen Maamulka Puntland, kuna biirayaan Maamulka loo dhisayo Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Waxa ay beeshaas sheegtay in kaddib sanado caddaalad darro iyo sadbursi ahaa ay iminka quusatay, kana tashatay aayaheeda.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidamada Galmudug ku biiray Maanta ay yihiin Qaar kamid ah Ciidamadii Beeshaasi Shaacisay in ay Puntland ka baxeen.
WAR CUSUB:- Ciidamo ka tirsan DF oo ku biiray dagaal ka socda gudaha dalka KENYA
Ilo-Xog-Ogaal ku sugan Gobolka Gedo, ayaa jornalizem u xaqiijiyay in Ciidamo ka tirsan Dowlada Federaalka Somalia, ay ku biireen Dagaalka ka socda Magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Ilo wareedka ayaa sheegaya in Laba gaari nooca loo yaqaan Cabdi-bilaha oo ay lee dahay DF ka dagaalamayaan Mandheera, waxaana la Tilmaamayaa inay garbinayaan mid kamid ah Beelaha Deegaankaasi ku dagaalamaya.
Aadan Axmed Xirsi oo ah Sargaal ka tirsan Ciidamada Dowlada Federaalka oo ku sugan Gobolka Gedo, ayaa Tilmaamay in wararka sheegaya in Ciidamada DF ay gaaren Mandheera been tahay, waxa uuna sheegay in Dagaalada ka socda Mandheera uusan aheyn mid khuseeya Dowlada Federaalka, balse uu yahay mid u dhexeeyo Beelo kasoo jeeda Kenya.
‘’Waxan beenineynaa in wararka sheegaya in Ciidamadeenu ku biireen Dagaalka ka socda Mandheera uu yahay been, waayo anaga lug kuma lihin Dagaalkaasi mana aha mid khuseeya Somalia’’ Sidaa waxaa yiri Aadan Axmed Xirsi
Dhanka kale, Ciidamada DF ee ku biiray Dagaalkaasi ka socda Mandheera ayaa la sheegayaa inay badi kasoo Jeedan gobolka Waqooyi Bari Kenya balse ay kamid yihiin Ciidamada Dowlada ee Gobolka Gedo, mana jirto war kasoo baxay Dowladda oo ku aadan faragalinta Ciidamada ay ku hayaan Mandheera.
Ciidan aad u fara badan oo Itoobiyaan ah oo ku soo qulqulaya SOOMAALIYA
Wariyaasheena ayaa soo sheegay in askar aad u farada badan oo Itoobiyaan ah oo ka yimid dalka Itoobiya in ay soo galeyn dalka Soomaaliya.
Ciidankan oo aad u hubeysan ayaa ka soo gudbay soohdimaha Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana la sheegay in lagu arkay degmada Doolow ee gobalka Gedo.
Dad ku sugan goobaha lagu arkay ciidanka Itoobiya oo diiday in magacyadooda ayaa saxaafadda u sheegay in ciidankan ay ku sii jeedaan gobalada Baay iyo Bakool, waxaana ay qeyb ka yihiin dagaalka wajiga labaad ee la doonayo in lagu qaado kooxda Al-Shabaab.
Shaley ayey ahayd markii abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Indho Qarshe uu ku dhawaaqay howgal loo bixiyay (Badweynta Hidniya) kaasoo la rabo in lagu furo waddooyinka ay xireen Al-Shabaab isla markaana lagu dardargaliyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Madaxda dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa dhawaan shaaciyay in la billaabi doono dagaal ka dhan ah Shabaab kaasoo la rabo in looga xorreeyo dalka oo dhan Al-Shabaab.
Ciidamada Itoobiya oo qeyb ka ah kuwa AMISOM ayaa labo maalin ka hor waxay la wareegeyn degmada Tiyeeglow ee gobalka Bakool, halkaasoo lixdii sanno ee la soo dhaafay ay ku sugaanyeen Al-Shabaab.
Wasiir Xaamud “Tan hadda noogu daran ee na heysata waa ciidanka dhulka”
Wasiirka Wasaarada Gaashaandhiga ee Somaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa waxa uu ka hadlay baahida ay maanta Somaliya u qabto inay hesho ciidan xoogan, oo dhinac kastaba leh.
Wasiirka, ayaa waxa uu tibaaxay in xilligaan Ciidanka Somaliya ay yihiin kuwo maleeshiyaad ah, waxaan rabnaa buu yiri inaan dhisno ciidan Qaran oo ilaalin kara xuduudaha dhulka iyo badda.
Isagoo la hadlaayay laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa wuxuu ka dhawaajiyay in baahida ugu daran ee xilligaan qabaan ay tahay, sidii Soomaaliya ay u heli laheyd ciidan xoogan oo xagga dhulka ah.
Wasiirka oo booqasho ku jooggo dalka Turkiga, ayaa bidhaamiyay in uu dalkaasi u jooggo, dhigiisa Turkiga oo uu kala kaashanaaya dhismaha Ciidanka Qalabka Sida ee Somaliya.
Wuxuu kaloo sheegayaa in Xukuumadiisu ay wado dhaq dhaqaaqyo ay ku dooneyso, in la helo ciidan tayo leh oo xagga dhulka ah, isla-markaana ay kala kaashanayaan Dowladdaha daneeya dib u soo laabashada Somaliya, oo ay ugu horeyso buu yiri Turkiga.
General Xaamud wuxuu Turkiga ku ammaanay in uu Somaliya ka caawinaayo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, wadooyinka, iskuulada iyo isbitaalada, wuxuuna muujiyay in taageerada Turkiga ee Somaliya ay tahay mid muuqata.
Mar la weydiiyay in Turkiga uu hubka culus ugu yaboohay Dowladda Federalka ee Somaliya, ayaa wuxuu si weyn u beeniyay jiritaanka warkaasi, isagoona sababta ku sheegay Somaliya oo ka mamnuuc ah in hubka culus la gaarsiiyo.
Daawo: Al Shabaab oo hadal yaab leh ka yiri hub ka dhigista Magaalada Muqdisho
Sheekh Cali C/laahi (Katiin) oo ka mid ah Saraakiisha dhinaca Dacwada ee Ururka Al Shabaab, ayaa waxa uu gumeysi hor leh oo ku soo wajahan dadka reer Muqdisho uu ku macneeyay, hub ka dhigista xilligaan laga wado Magaalada Muqdisho.
Sheekh Cali C/laahi, ayaa sheegay in dhinacyada ay dagaalanka kula jiraan ay doonayaan, in ay fara marnaan soo istaagaan dadka reer Muqdisho, si looga yeelo wax kastaa oo la doonaayo, sida uu yiri.
Sheekh Cali Katiin oo la hadlay Idaacada Alfurqaan, ayaa sidoo kale sheegaaya in dhaqan lagu yaqaano gumeystaha uu yahay, in dadka hub ka dhigis lagu sameeyo, si loo waayo buu yiri cid hadli karta.
Waxa uu intaa ku daray in dadka reer Muqdisho lagu garanaayo inay dagaal adag la galaan waxa uu ugu yeeray cadowga, isagoo soo hadalqaaday inaanay ka waaban Ciidankii Militariga ee Itoobiya, ee sanadkii 2006-dii gudaha u soo galay Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxa uu ka digay in dadka reer Muqdisho ay noqdaan kuwo daciif ah, oo la duleysto sida uu yiri, wuxuuna ku booriyay inay ka horyimadaan waxa uu ugu yeeray cadowga.
Hadalka ka soo yeeray Cali Katiin waxa uu ku soo aadayaa, xilli isbedel xagga ammaanka ah laga dareemay Caasimada, tan iyo markii hub ka dhigista ka bilaatay horaantii bishaan.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Ciidamada oo sheegay in seeftu ay markaan dul taalo shaqaalaha Dowladda
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Ciidamada Qalabka Sida, ayaa waxa uu digniin adag u jeediyay dhammaan Shaqaalaha Dowladda Federalka ee Soomaaliya, ee dalka ka hawlgala.
Weerar soo dhowaaday iyo Al-Shabaab oo amartay in laga baxo magaalada…
Maleeshiyada Al-shabaab ayaa ku amray dadka ku nool magaalada Buula-Mareer ee gobolka Shabellaha Hoose in ay magaalada baneeyaan, xilli weerar culus uu kusoo wajahn yahay.
Wararka aan ka heleyno magaalada Buula-Mareer ee gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab ay dadka ku amreen in magaalada ay ka barakacaan, kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ay magaalada usoo dhawaadeen, lagana cabsi qabo inay gudaha u galaan, oo ay qabsadaan.
Gudoomiyaha Qoryooleey Maxamed Cismaan Xaaji ayaa xaqiijiyay in Shabaabka Buula-Mareer ay arrintan ku ciqaabayaan shacabka magaalada.
Gudoomiyaha Qoryooleey ayaa sheegay in Al-shabaab ay makarafoono ku soo xireen gaadiidka, islamarkaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid yihiin dadka magaalada ha baneeyaan, waxaa soo galaya magaalada cadaw.
Lama oga ujeedka Al-Shabaab ay ka lee yihiin arrintan, waxaase ay ka mid tahay ficillada arxan darrada ah ee argagixsadan.
Dagaal culus, ayaa la filayaa in gobolka Shabeelaha Hoose ay dhowaan ka qarxaan, ayada oo dowladda Soomaaliya ay dooneyso inay ka saarto Al-Shabaab gobolka, waxaana goobaha weerarka uu ku socdo ka mid ah degmada Baraawe.
Madaxweynaha Shabeelle State oo ka cabanaya in caalamka uu uga hiiliyey…
Madaxweynaha mamaulka Shabeelle State, Abuukar Mardaadi ayaa sheegay in qolada beesha caalamka la baxday aaney dan iyo maslaxad u heynin Soomaaliya, wuxuu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa ugu horeeya ee Soomaaliya ay ka dhaaqi la’dahay.
Abuukar Mardaadi oo u warramay Idaacad Maxalli ah oo Muqdisho ku taalla ayaa sheegay in maamulka seddaxda gobal ee koonfur galbeed laga lee yahay dano gaar ah oo beesha caalamka ayaa gadaal ka riixeysa ayuu yiri.
“Maamulkan seddaxda gobal waxaa taageeraya beesha caalamka oo dan ayey ka lee yihiin” ayuu yiri Abuukar Mardaadi.
Wuxuu sheegay oo kale wixii ka dambeeyay burburkii dalka 1991-dii in beesha caalamka ay lugaha kula jirtay danaha Soomaaliya, dhinac siyaasad, dhaqaale iyo danba sidda uu yiri.
Mar uu ka hadlaayay sababta uu u socon la’yahay maamulkiisa wuxuu tilmaamay in beesha caalamka aaney doneynin waxa ay doonayaan shacabka ku nool gobalka Shabeellaha Hoose.
Wuxuu kaloo sheegay in seddaxda gobal ee maamulka loo sameenaayo aaney dadka deggan isla howgalli karin maadama ay ka fog yihiin, wuxuuna beesha caalamka iyo dowladda ugu baaqay in ay oggolaadaan wax yaabaha ay doonayaan shacabka ku dhaqan gobalka Shabeellaha Hoose.
Maamulka Shabeelle State oo bishii March looga dhawaaqay degmada Afgooye ee gobalka Shabeellaha Hoose ayaa weli heli ictiraaf dhinaca dowladda ah iyo beesha caalamka.
Puntland oo wadda qorshe laga cabsi qabo inuu xiisad cusub abuuro (Xog)
Warar oo naga soo gaaraya dhanka Maamulka Puntland ayaa sheegaya in Maamulka uu wado Qorsho cusub uu ku doonayo inuu maamulka Khaatumo kusoo biiriyo Puntland.
Ilo wareed ka tirsan Maamulka Puntland ayaa inoo xaqiijiyay in Maamulka ay arrintaasi kala hadleen Madaxweynaha Khatumo Cali Khaliif iyo Odayaal dhaqmeed ka tirsan Khatumo, balse Jawaab aysan weli ka soo bixin.
Waxaa la filayaa in kulan Xasaasi ah ay wada qaadan doonaan Madaxweynayaasha Puntland iyo kan Khaatumo, kuwaasi oo ka arrinsan doona wada shaqeynta, iyadoona C/weli Gaas uu Madaxweyne Cali Khaliif ka dhaadhacsiin doono in leysku biiriyo Puntland iyo Khaatumo.
Madaxweyne Gaas ayaa waxaa la sheegayaa inuu diyaar u yahay haddii ay dhacdo riyadiisa in Maamulka Khatumo uu siiyo Seddex xil oo kala ah, Madaxweyne Ku-xigeenka, wasiirka Gaashandhiga iyo Warfaafinta.
Maamulka Puntland ayaa wada Qorsho lagu dardar galinaayo is raaca labada Maamul, waxaana muuqaneysa in Maamulka Somaliland uu arrintaasi ka sii baaran dagayo.
Dadka reer Khaatumo, ayaa arrintan u arka daan-daansi iyo xaasidnimo ka dhan ah maamulkooda cusub, oo iminka rajo weyn laga qabo inay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ansixiyaan.
Dhanka kale, waxaa laga cabsi qabaa haddii ay dhacdo in Maamulka Puntland iyo Khatuma Midooban ay Ciidamada Somaliland weeraro ka geystaan deegaanada hoostaga Khatuma.
DEG DEG:-Madaxweynaha Djibaouti Oo Ka Badbaaday Isku Day Dil Yaa Dili Rabay Iyo Warbixin Dheeraad Ah.
Ilo wareedyo ku sugan caasimadda dalka D’jibouti ayaa sheegay inay galabta toogasho ka dhacday Garoonka Diyaaradaha ee magaalladda D’jibouti, xilli uu Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ka soo degayey Garoonkaasi.
Warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan qaabkii uu u dhacay weerarkaasi, iyo ujeedadii laga lahaa toogashadaasi.
La-taliyaha Madaxweyne Geelle ee dhinaca Saxaafadda, Najiib Cali Daahir oo la hadlay LaantaAfka Soomaaliga ee Idaacadda Codka Maraykanka (VOA) ayaa tilmaamay inuu Madaxweyne ka baxay Garoonka toban daqiiqo ka hor inta aysan toogashadda dhicin.
Waxa uu tilmaamay inuu Askari ka tirsan Ilaaladda Jamhuuriga ee u qaabilsan Ammaanka Madaxweyne Geelle uu furay Tacshiiradaasi, waxaana uu dhaawacay labo qof oo mid ka mid yahay Sarkaal ka tirsan Ilaaladda Khaaska ahna U-qeybsanaha caafimaad ee Madaxweynaha.
Dhinaca kale, La-taliyaha Madaxweyne Geelle ee dhinaca Saxaafadda waxa uu wareysigiisaku sheegay inay toogashadaasi u muuqatay mid ka dhalatay khilaaf gaar ah oo u dhexeeya Askari geystay toogashadda iyo Sarkaalka la dhaawacay.
Xaalladda Garoonka Diyaaradaha ee Djibouti ayaa haatan deggan, iyadoo Askarigii weerarka geystay la xiray, waxaana socda baaritaan ku aadan sababaha toogashada loogu soo beegay Imaanshaha Madaxweyne Geelle iyo Wafdigii la socday.
Sarkaal ka tirsan Al Shabaab oo la sheegay in Gobalka Shabeellaha hoose lagu dilay
Saraakiisha ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Gobalka Shabeellaha Hoose, ayaa sheegay inay dileen Sarkaal kamid ah Ururka Al Shabaab iyo ciidamo ka bar-bar dagaalamayay.
Maxamed Axmed Cabdi oo kamid ah Saraakiisha ciidamada Dowladda ee Gobalka Shabeellaha Hoose, ayaa wuxuu sheegay in ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya, xalay dagaal ay ku dileen sarkaal ka tirsan Shabaab.
Dilka sarkaalkaan iyo saddex Askari oo kale ayaa waxa ay ka dambeysay, kadib markii dagaal uu dhexmaray ciidamo ka tirsan Milateriga Soomaaliya iyo kuwa Shabaab, markii ciidamada Milateriga ay weerar ku qaadeen ciidamo Shabaab ka tirsan oo ku sugnaa inta udhaxeysa Mubaarak iyo Janaale ee Gobalka Shabeelaha hoose.
Dagaalka ragaan lagu dilay ayuu sheegay Sarkaalkaan ka tirsan ciidamada Milateriga Soomaaliya inay qaadeen, iyaga markii ay ka warheleen in Al Shabaab halkaasi ku sugan yihiin.
Sarkaalkii ugu sareeyay ciidamada Shabaab ee ku dhuumaaleysanayay inta udhaxeysa Janaale iyo Mubaarak, ayuu sheegay inay halkaasi ku dileen saddex kale oo askarta kamid aheydna ay dileen, halka intii kale ay ka carareen goobta dagaalka uu ka dhacay.
Majirto ilo kamadaxbanaan Sarkaalkaan ka tirsan ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee Gobalka Shabeelaha hoose oo xaqiijinaya in sarkaal ka tirsan Shabaab lagu dilay Gobalka Shabeelaha hoose.
Al Shabaab dhankooda weli wax war ah kama soo bixin oo ku aadan hadalkaan kasoo baxay Saraakiisha iyo dagaalka ka dhacay Gobalka Shabeelaha hoose.